Waxaan kuu sheegeynaa waxa edamame yahay, hantidiisa iyo sida loo qaato | Cuntada Nutri
Waxaan kuu sheegeynaa waxa edamame yahay, hantidiisa iyo sida loo qaato
Edamame wuxuu xaaqaa guryaha dad badan. Waxaa laga yaabaa inaadan si sax ah u aqoonin waxa cunnadani tahay, waxa ay yihiin ama sida saxda ah loo cuno. Ha ka welwelin, hoos, waxaan kuu sheegi doonaa wax walba oo faahfaahsan.
Isticmaalka soyadu waa sii kordheysaa, wuxuu ku faafay adduunka oo dhan. Edamames waa cunto caafimaad leh, aad u hodan ku ah nafaqooyinka kuna habboon in laga dhigo cunto fudud oo caafimaad leh.ka magacyada ka yimid soybeans, magaca wuxuu loola jeedaa saxanka lagu sameeyay soyadan cagaaran, ma aha sheyga laftiisa. Taasi waa, qeybaha cagaaran lama yiraahdo edamame Diyaargarowgu waa mid aad u fudud, oo ah arrin sababtay in dad badani ku soo bandhigaan cuntadooda.
1 Waa maxay edamame?
2 Guryaha Edamame
3 Sideed u cuntaa?
4 Halkee laga iibsadaa
Waa maxay edamame?
Edamame waa jiiska ama digirta cagaaran ee soyka, waa la aruuriyay intaysan bislaan. Waxay yihiin cagaar, midab aad ugu eg digir iyo digir aan naqaano. Wuxuu ka soo jeedaa qoyska legume oo cabirkiisu yar yahay. Digirta cagaaran ee soyabeedka waxaan ka helnaa inta udhaxeysa 2 ama 3 xirmooyin soosocod ah waxayna leeyihiin faraq weyn oo udhaxeeya.
Edamame, Waxaa lagu daboolay timo yaryar, Dabeecad lagu xisaabtamo si loo ogaado sida looga sooci karo digiraha kale ee cusub.
Marka xigta, waxaan kuu sheegi doonnaa maxay yihiin astaamaha cajiibka ah iyo faa'iidooyinka edamame.
Waa ilo weyn oo ah borotiinka asalka khudradda.
Waxay ku dhex muuqataa waxyaabaha ay ka kooban tahay kaalshiyamka iyo birta.
Cuntadan ayaa ah dufanku ku yar yahay, taas oo ku habboon dhammaan kuwa doonaya inay yareeyaan ama xakameeyaan kolestaroolka.
Waxay leedahay astaamo antioxidant, mahadnaqa ay ka kooban tahay isoflavones. Isoflavones wuxuu caawiyaa dumarka dayska si loo ilaaliyo maqaarka iyo noolaha wanaagsan.
El edamame, wuxuu urursadaa magnesium, macdanta hagaajisa caafimaadka lafaha.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay birta sare iyo borotiinno tayo sare leh ayaa ka dhigaya cunno awood noo leh inay naga buuxiso tamar.
Waxay leedahay wax weyn oo sare fiber. Wixii kasta 100 garaam oo edamame ah waxaan heleynaa 8 garaam oo fiber ah.
Waa cunno aan lahayn gluten, sidaa darteed kuwa xasaasiyadda ku leh gluten way u qaadan karaan dhibaato la'aan.
Hayso our habka difaaca jirka oo adag.
Waa a isha weyn ee tamarta.
Waxaa lagula talinayaa dadka sonkorow
Yaree dhibaatooyinka kalyaha
Hagaajinta caafimaadka lafahayaga.
Ka hortaga dhiig yari maadada faybarkeedu sareeyo.
Edamame, maadaama ay ka timaado soybeans, waxay kaloo kordhisaa tusmooyinkayaga walxaha soo socda:
Sideed u cuntaa?
El edamame Waa wax aad u fudud in la cuno, si dhakhso leh ayaa loo diyaariyaa natiijaduna waa mid cajiib ah. Waqtiga wax la cunayo, boodhka ayaa lagu furaa iyadoo la kaashanayo ilkaha ama gacmaha, carrabka waxaan ku soo aruurineynaa miraha ku jira gudaha buundadana waa la tuurayaa. Waa wax la mid ah cunista dhuumaha.
Waxa ugu caansan uguna fudud waa karkari biyo cusbo yar ku jira. Qiyaastii 3 ama 5 daqiiqo. Marka la kariyo waxaan ku wehelin karnaa saliid iyo milix cusbo ah ama xoogaa uunsi ah. Dhinaca kale, waxaan ka saari karnaa badarka oo ku dari karnaa salad, ama ku kari karnaa digsi suugo yar oo soy ah iyo toon shiidan.
Waxa caadiga ah waa in loo qaato sidii aperitifWaxaa lagu soo bandhigayaa boodhkii oo dhan oo la kariyey oo waxaan u cunaynaa sidii inay yihiin tuubooyin. Waxaa loo qaadan karaa diirimaad ama qabow. Dhadhankiisu waa mid khafiif ah oo isku dhafan tiro badan oo cuntooyin ah.
Halkee laga iibsadaa
Waqtigaan la joogo, magacii cunnadan kadib, waxaan ka heli karnaa edamame meelo kala duwan iyo suuqyo caan ku ah dadka oo dhan. Waxaan ku heli karnaa qaabab kala duwan, mid cusub, abuur, diyaar u ah in la cuno ama la qaboojiyoKadib waxaan kuu sheegeynaa halka aad ka heli karto cunnadan macaan.
En Amazon Spain abuurka edamame waa la iibsan karaa si loo beero.
Dukaamada waaweyn Lidl Waxaan u aragnaa inuu barafoobay, oo leh qaab 400 garaam ah.
En Mercadona, mid ka mid ah suuqyada waaweyn ee Isbaanishka oo ay hadda gabaabsi ka yihiin, waxaan ka helnay tiro 500 garaam ah oo ku jirta qaybta barafaysan.
En isgoyska Waxaan ku helnay qaab yar, 100 garaam oo edamame ah oo diyaar u ah-cunid, hab fiican oo lagu tijaabiyo hadaadan wali aqoon.
En Si garoonka loo dhigo, Dukaankan weyn waxaan ka helnaa qaab 300 garaam ah oo aad u barafaysan.
El Maxkamada ingiriiska, waxaan iibinaa edamame tiro ahaan 500 garaam, waxaadna ka heli doontaa waaxda la qaboojiyey.
La SirenaDukaankan, oo inta badan iibiya alaabooyinka la qaboojiyey, ayaa sidoo kale soo iibsaday edamame, oo ku jira qaabab 400-garaam ah.
Edamame Waxay leedahay qiimo u dhexeeya € 1,80 ilaa kudhowaad 4 euro, iyadoo kuxiran astaanta iyo tirada.
Haddii aad ku nooshahay magaalo dhexdhexaad ah, hubaal waxaad ka heli doontaa ikhtiyaarka helitaanka edamame, qaab kasta ha noqdee. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan helin, waxaad ku dalban kartaa khadka tooska ah, xilligan waxaa jira bogag badan oo websaydh ah oo leh dukaanno internetka ah oo na siiya wax soo saarkooda cusub isla markaana noogu soo dira muddo gaaban.
Hore u soco oo iskuday cunnadan caafimaadka qabta iyo sida ay moodo u noqotay. Ikhtiyaar ku habboon cunto fudud, kaloriin aan lahayn oo macaan. La ciyaar cuntooyinkaaga oo ku dar dariiqa aad adigu xiisaha u qabto. Waxaad hubtaa inaad suxuuntaada siiso taabasho qumman.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cuntada Nutri » Nafaqeyn » Waxaan kuu sheegeynaa waxa edamame yahay, hantidiisa iyo sida loo qaato
4 + 1 talooyin ku saabsan cunto karinta CBD
Waa maxay dabocase